KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 22/07/2012
Children Development Center-CDC ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး မန်းရွှေနှင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ဘဏ္ဍာငွေလျော့သော်လည်း ဝေဒနာသည်နှင့် ကျောင်းသားဦးရေ မလျော့သည့် မယ်တော်ဆေးခန်း၏ လက်ရှိ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကရင်သတင်းဌာနမှ မယ်တော်ဆေးခန်း၏ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ CDC ကျောင်းအုပ်ကြီး ဆရာမန်း ရွှေနှင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားချက် ဖြစ်သည်။
KIC - လက်ရှိ မယ်တော်ဆေးခန်းက ဘဏ္ဍာရေး အခက်အခဲရှိတယ်ကြားရတော့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လို အခြေအနေတွေ ရှိနေပါသလဲ။
မန်းရွှေနှင်း - ကျနော်တို့အနေအထားက အားလုံးအတွက် အခက်အခဲရှိပါတယ်။ မယ်တော်ဆေးခန်းနဲ့ စီဒီစီပညာရေးလုပ်ငန်းကလည်း အတူတူပါပဲ။ စီဒီစီက မယ်တော်ဆေးခန်းရဲ့ အကိုင်းတစ်ခု အပါအ၀င်ပါ။ တဖက်ကနေကြည့်ရင် ဆေးခန်းအနေနဲ့ ဒီမှာကျောင်းနေနိုင် မယ့် ကလေးတွေရဲ့ ဘော်ဒါဆောင် သုံးဆယ်ကျော်မှာ ကလေး ၃,၀၀၀ကျော်အတွက် ရိက္ခာခြောက်တွေ စီစဉ်ပေးတယ်။ ဆိုလိုတာက မယ်တော်ဆေးခန်းအနေနဲ့ အခုလိုမျိုး ၀င်ငွေပဲပြောပြော အကူအညီပဲပြောပြော နည်းပါးသွားတာတို့ လျော့သွားတဲ့အခါကျတော့ ကျန်းမာ ရေးကော၊ ပညာရေးကော ကလေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း အားလုံး အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။
KIC - ပညာရေးအပိုင်းမှာ ဘယ်လိုမျိုး အခက်အခဲတွေ ရှိတာလဲ။
မန်းရွှေနှင်း - ကလေးတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင်ကလို ပုံမှန်တိုင်း စားရသောက်ရတဲ့ အနေအထားတွေ ခက်ခဲလာတယ်။ အရင်ကဆို တစ်ယောက်ကို တစ်လမှာ ဆန် ၁၄ကီလိုလောက် စားရတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ၁၀ကီလိုပဲရတဲ့အတွက် မလောက်ဘူး ဖြစ် သွားတယ်။ တခြားဟင်းတို့၊ ရိက္ခာပစ္စည်းတွေ အများကြီးလိုအပ်တာတွေ ရှိသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်း ကလေးတွေအနေနဲ့ အရင်က သုံးနပ်စားရမယ့်နေရာမှာ အခုဆို နှစ်နပ်တောင်မှ အချိန်နဲ့ ကွက်တိကျွေးရတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့စီဒီစီကျောင်းမှာ အယောက် ၇၀ကျော် ရှိတယ်။ သူတို့တွေရတဲ့ လစာထဲက ၂၀ရာခိုင်နှုန်း ဖြတ် တောက်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒါတွေအပြင် ကျနော်တို့ နေ့စဉ် ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ သင်ကြားရေးအထောက်အကူ လိုအပ်ချက် တွေလည်းပဲ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ကျနော်တို့လျော့ပြီး သုံးရတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။
KIC - ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြောင့် ဘော်ဒါနေကျောင်းသူ၊သားတွေကိုကော လျော့ချလိုက်တာမျိုးရှိလား။
မန်းရွှေနှင်း - ကျနော်တို့ဘော်ဒါနေ ကလေးတွေကို လျော့တာတော့မရှိပါဘူး။ ကျောင်းကနေ နှုတ်ထွက်သွားတာမျိုး၊ အိမ်ပြန်သွားရတာ မျိုးတွေတော့ တစ်ယောက်မှမရှိသေးဘူး။ သူတို့ကို အခက်အခဲတွေအကြောင်း ရှင်းလင်းပြတယ်။ အဲ့အပေါ်မှာလည်း ကလေးတွေက အရင်ကထက် အပင်ပမ်းခံလာကြတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ သူတို့ဘာသာသူတို့ ရှာစားလာတယ်။ မှိုစိုက်တာတွေ၊ စပါးစိုက်တာတွေ ပိုပြီးတော့ လုပ်လာကြတယ်။ ရေရှည်မှာလည်း ရန်ပုံငွေရနိုင်တဲ့နည်းလမ်း၊ စားရေးသောက်ရေး အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ၀ိုင်းရှာ လာကြတယ်။
KIC - မယ်တော်ဆေးခန်းအကူအညီပေးနေတဲ့ ဘော်ဒါကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
မန်းရွှေနှင်း - စီဒီစီအနေနဲ့ကတော့ သုံးရာရှိတယ်။ မယ်တော်ကနေ တာဝန်ယူထားပြီး ရိက္ခာအစီအစဉ်မှာ တာဝန်ယူထားတဲ့ ဘော်ဒါက တော့ ၃၀ကျော်ရှိတယ်။ ကလေးအားလုံးပေါင်း ၃,၀၀၀ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် တစ်လပြီးတော့ တစ်လ လည်ပတ်ဖို့အတွက် ရှာနေရတဲ့၊ အလှူခံနေရတဲ့ အနေအထားတွေနဲ့ပဲ သွားနေရတာပေါ့နော်။
KIC - ဆရာ၊ဆရာမတွေကို လစာတွေ ၂၀ရာခိုင်းနှုန်းလျော့ချတယ်ဆိုတော့ အရင်ကကော ဘယ်လောက်ရကြပါသလဲ။
မန်းရွှေနှင်း - ရတဲ့အခြေခံလစာဆိုတာကလည်း ပြောရခက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က အခြေခံလစာအပြင် နေရေးထိုင်းရေးအတွက် အိမ်လ ခတို့ မှီခိုသူစရိတ်တို့ ပေါင်းပေးတာတော့ ရှိတယ်။ အားလုံးပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လူပျိုလူလွတ်တစ်ယောက်အတွက်ကတော့ သုံးထောင်ဝန်းကျင်လောက် ရပါတယ်။ အခုလို ၂၀ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် နည်းသွားကြတယ်။ တခြားကျောင်းတွေ ထက်စာရင်လည်း နည်းသွားကြပါတယ်။ တချို့ကျောင်းတွေဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ လည်ပတ်မှုအရ အကူအညီရတဲ့နေရာ မတူညီဘူး။ မတူတဲ့အပေါ်မှာ တချို့ကျောင်းတွေက နှစ်လ၊သုံးလ အခုထိ လစာမရသေးတာတွေ ရှိတယ်။ စီဒီစီက ပုံမှန်တော့ ရနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းတော့ ကျနော်တို့ ဖြတ်ပေးရတယ်။
KIC - ဘတ်ဂျတ်လျော့ချလာပေမယ့်လို့ လူနာလျော့မလာတဲ့အတွက် အရေးပေါ်လူနာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကုန်အကျများမယ့် လူနာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိအချိန်မှာ ကျန်းမာရေးအပိုင်းမှာကော ဘယ်လို စီစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသလဲ။
မန်းရွှေနှင်း - လတ်တလော ကျန်းမာရေးဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တကယ်လည်း လိုအပ်တယ်။ လူနာတွေလည်း လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေကို တော့ ဘာမှရွှေ့ပြောင်းတာတို့ ဖြုတ်တာတို့ ဘာမှမလုပ်ရသေးပါဘူး။ လုပ်ငန်းတစ်ချို့ကိုတော့ အနေအထားတစ်ခုအရ လျော့လိုက်တာ တွေရှိတယ်။ ဘတ်ဂျက်အခြေအနေအရ ဆိုပါတော့။ အရင်ကဆိုရင် မျက်စိခွဲလူနာတွေလာရင် လူနာတွေအတွက် စားရေးသောက်ရေး ကိစ္စတွေ စီစဉ်ပေးတယ်။ လူနာစောင့်တွေအတွက်လည်း စားရေးသောက်ရေး စီစဉ်ပေးတယ်။ အဲ့လူနာစောင့်တွေရဲ့ စားရေးသောက်ရေး ကိစ္စတွေလည်းပဲ ကျနော်တို့စည်းစနစ်ကျအောင်ပြန်ပြီတော့ ကိုင်တွယ်လာမယ်။ တဖက်ကလည်း မဲဆောက်ဆေးရုံကိုပို့မယ့် လူနာတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့လည်း ကျနော်တို့က ရောဂါအခြေအနေပေါ် ကြည့်ပြီးတော့ ဒါကတော့ ဒီမှာကုလို့ရတဲ့ဟာဆိုရင် ဒီမှာပဲကုလိုက်ပြီးတော့ ပို့ဖို့လိုအပ်တဲ့ တကယ့်တကယ်မပို့မဖြစ်လို့ လိုအပ်တဲ့လူနာတွေကိုတော့ ကျနော်တို့ပို့မယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်စိစစ်ပြီး ဘတ်ဂျတ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လို့ အစီအစဉ်တစ်ခု ပြန်လျော့လိုက်တာပဲ ရှိပါတယ်။ လုံးဝဖြုတ်လိုက်တာ မရှိသေးပါဘူး။
အရေးပေါ်လူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ခုနက ကျနော်တို့ပြောသလိုပဲ တချို့လူနာရဲ့ပံ့ပိုးမှုလည်းလိုတယ်။ လူနာဘက်က ကုန်ကျစရိတ်တွေ တဖက်ကလည်း မယ်တော်ဆေးခန်းထဲက တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးရတာမျိုးတွေလည်း ရှိသလို တချို့ဒီလူနာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ တိုက် ရိုက်အကူအညီပေးနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကူညီပေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့လူတွေကိုလည်း ကျနော်တို့က ထပ်ပြီးတော့ ချဉ်းကပ်ပြီး မဖြစ်မနေပို့ရမယ့် လူနာတွေအတွက် အကူအညီတောင်းသွားမှာပါ။
KIC - မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းက မဲဆောက်မြို့တော်ဝန်နဲ့ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်တို့ တွေ့ခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်လေ။ အဲဒီတုန်း ကကော အခုအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြသလဲပေါ့။
မန်းရွှေနှင်း - ကျနော်တို့ မြို့တော်ဝန်ဆီသွားတဲ့ကိစ္စကလည်း လက်ရှိ ဒီမှာရှိတဲ့ အခက်အခဲတစ်ချို့ထဲက တစိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲ ကျ နော်တို့ ပြောဖြစ်တယ်။ အတွင်းထဲက အကူအညီတွေ ပြတ်တောက်ခံရတာတွေကို မပြောဘူး။ မြို့တော်ဝန်ကတော့ ကျနော်တို့ကို ဘယ် လောက်ကြာကြာ ထပ်နေဖို့ပြုဖို့ရှိလဲ မေးတာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ဒါက ပြောရခက်တယ်။ ပြည်တွင်းအခြေအနေကလည်း လက်ရှိအချိန်ထိ တည်ငြိမ်မှုဆိုတာ ကျနော်တို့ မမြင်ရသေးဘူး။ အဲ့လိုမျိုးတွေအပေါ်မှာ ကျနော်တို့က ဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ ပြောဖြစ်ပါ တယ်။ ပထမအနေနဲ့ ကျနော်တို့က ဒီမဲဆောက်မှာရှိတဲ့ အခက်အခဲတချို့ကို ရှင်းပြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မယ်တော်ဆေးခန်းတို့၊ ကျောင်းတို့ လည်ပတ်နေတဲ့အနေအထားတွေ ရှေ့ဆက် ကျနော်တို့ လက်တွဲနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးဖြစ် တဲ့အခါကျတော့ မြူနီစီပယ်(စည်ပင်)နာယကကြီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျနော်တို့ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့နဲ့အတူတကွ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့ ပြောဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်ကလည်း ကျနော်တို့ဘက်က အခက်အခဲမျိုးစုံ ရှိတာပေါ့။ အဲ့ကာလတုန်းက ကျနော်တို့သွားတာက အဓိကက ကျနော်တို့ တစ်လတစ်လမှာ မယ်တော်ဆေးခန်းက လူနာတွေထဲကနေ သေတာတွေ ၂၀လောက်ရှိတယ်။ သေသွားတဲ့လူတွေအတွက် သင်္ဂြိုလ်ဖို့နေရာတွေ၊ အခက်အခဲတွေတချို့ သွားရှင်းပြတယ်။ သွားရှင်းပြ ရင်းနဲ့ပဲ တဖက်ကလည်း သင်္ဂြိုလ်ဖို့အနေအထားတွေကိုလည်း သူတို့အနေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ စီစဉ်ပေးမယ်၊ ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထား မျိုးလောက်ပဲ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း လက်ရှိငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာထက် လတ်တလော ကျနော်တို့ကြုံရတဲ့ အနေအထားတွေလောက်ပဲ ပြောဖြစ်တယ်။
KIC - ဒါဆိုမယ်တော်ဆေးခန်းက ပညာရေးကော၊ ကျန်းမာရေးမှာ ထိုင်းပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဌာနတွေနဲ့ ဘယ်လို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် နေတာတွေရှိပါသလဲ။
မန်းရွှေနှင်း - မယ်တော်ဆေးခန်းအနေနဲ့ကတော့ ကျနော်တို့ ဒီမဲဆောက်ဆေးရုံနဲ့ ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်တာ၊ လူနာပြောင်းလဲပို့တာတွေ ကို မဲဆောက်ဆေးရုံနဲ့အတူ ကျန်းမာရေးအတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာတွေ ပုံမှန်သွားနေတယ်။ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီမှာရှိ တဲ့ တာ့ခ်ခရိုင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပုံမှန် အချိတ်အဆက်တွေရှိတယ်။ ဆရာဆရာမတွေအရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ထိုင်းပညာရေး ဌာနနဲ့ အမြဲတမ်း ဆက်စပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရတာတွေ ရှိတယ်။
KIC - ဟုတ်ကဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့လက အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်းနဲ့ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်တို့ တွေ့ဆုံတုန်းက မယ် တော်ဆေးခန်းကို ဘယ်လိုမျိုးပြောသွားတာ ရှိပါသေးလဲ။
မန်းရွှေနှင်း - သူတို့ကတော့ ကျနော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ အစိုးရက တာဝန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ လုပ် ဆောင်ပေးတဲ့အတွက် သမ္မတကြီးကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။ တဖက်ကလည်း လက်ရှိ ကျနော်တို့ အခက်အခဲ တချို့ ရှိနေတာလောက်ပဲ ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အပေါ် အလှူရှင်တွေက ကူညီနေတာတွေ လျော့ချလိုက်ပြီတို့၊ လက်ရှိမှာ ငွေကြေး အခက်အခဲ ဘယ်လိုရှိနေတယ် ဆိုတာတွေကိုတော့ ကျနော်တို့ဘက်က မပြောဖြစ်ပါဘူး။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သူတို့ကလည်း အလှူငွေ ပေးတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း ဘော်ဒါဆောင်ကျောင်းသူ၊သားတွေအတွက် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြုံနေတော့ အဲ့ပြဿနာတွေ ကို ဖြေရှင်းလိုက်ရတယ်။ မီဒီယာတွေကိုတော့ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့က ပြောတာပေါ့။ ကျနော်တို့ကို လာပြန်ခေါ်ဖို့ ဘာဖို့တို့လေ။ ဒါပေ မယ့် ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ အဲ့လောက် အဆင့်ထိကို မဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါဘူး။
KIC - ဘဏ္ဍာရေး အခက်အခဲအပေါ်မှာ အခြားဘယ်လိုဖြေရှင်းတာမျိုး ရှိနေပါသလဲ။
မန်းရွှေနှင်း - ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာလိုင်းကနေ မေးလာတာကို ဖြေပေးလိုက်တာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ တဖက်ကလည်း နိုင်ငံခြားမှာ ရှိ နေတဲ့ စီဒီစီက ထွက်သွားတဲ့ ကလေးတွေ၊ ဆရာ၊ဆရာမတွေဆီ ကျနော်တို့ရဲ့ လက်ရှိ အခက်အခဲစာစောင်တွေ ပို့ပေးတယ်။ သူတို့က လည်း အကြံဥာဏ်ဝိုင်းပေးတယ်။ ကူညီနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေပေးတယ်။ ကျောင်းမှာလည်း ဆက်စပ်ပြီးတော့ ကျောင်းသားမိဘတွေ အကုန်လုံးခေါ်ပြီး မိဘဆရာအသင်း အစည်းအဝေးခေါ်တယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းအခက်အခဲတွေ လက်ရှိ ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲ တွေကို ဘယ်လိုဝိုင်းကူကြမလဲဆိုတော့ မိဘတွေကလည်း နည်းလမ်းတွေပေးတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အလှူငွေတွေ ပေးပါတယ်။ သူတို့သူဌေးတွေဆီမှာ အလှူငွေဖြတ်ပိုင်းတွေနဲ့ အလှူခံပေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
KIC - မယ်တော်ဆေးခန်းကို အဓိက ကူညီပေးနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ပြောပြလို့ရနိုင်ပါသလား။ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် မယ်တော်ဆေး ခန်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အကူအညီ ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရသလဲပေါ့။
မန်းရွှေနှင်း - မယ်တော်တစ်ခုလုံးကို အကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့ကတော့ များတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဥရောပနိုင်ငံတွေ များတယ်။ ချက် ချင်းကြီး ကျနော်တို့ ခံနေရတာကတော့ နော်ဝေးအစိုးရရဲ့ အကူအညီကနေ ပြည်တွင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ မှာ သွားလိုက်တဲ့အတွက် ဒီဘက်တွေမှာတော့ ပြတ်တောက်မှုတွေ ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ ရာခိုင်နှုန်းအရ အဲ့လိုမျိုးပြောရင်တော့ တော် တော်တော့ ခက်ပါတယ်။ ကျောင်းဆိုလည်း ကျောင်းအတိုင်းအတာအရ၊ ဆေးခန်းဆိုလည်း အဲ့လိုပါပဲ။ တစ်ခုလုံး အတိုင်းအတာအရဆို ရင်တော့ သေချာပါတယ်။ ၄၀ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရပါတယ်။
KIC - နောက်ထပ် ဘာများ ဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါသေးသလဲ။
မန်းရွှေနှင်း - ကျနော်တို့လုပ်လာတာကလည်း နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ပြီ။ ဒီမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလူထုတွေကိုကော၊ ဒုက္ခ သည်တွေကိုကော မိဘလုံးဝမဲ့တဲ့ ကလေးတွေကိုကော၊ မိဘနဲ့ အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့ကလေးတွေ အားလုံးကို ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးအ ရ ၀ိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးပြီ။ လုပ်လည်း လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်လုပ်လာခဲ့ပြီးမှ အကူအညီတွေကို ချက်ချင်း ဖြတ် တောက်ပစ်လိုက်တော့ ကျနော်တို့ နည်းနည်းတော့ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက အချိန်ကာလတစ်ခုအရ ဖြတ်မယ်၊ ပြုမယ် သဘောတရား မပေးတော့ဘူး၊ မကမ်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း သဘောတူညီချက်လေးပေါ့။ သုံးနှစ်အတွင်း၊ ငါးနှစ်အတွင်းတော့ ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုလုပ်ပေးပါ။ အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေအထားနဲ့ အလှူရှင်တွေဘက်ကလည်း ကျနော်တို့ကို ချည်းကပ်သင့်တာပေါ့။ ဘာပဲပြောပြော ဒီအခက်အခဲက ကျနော်တို့ အခက်အခဲမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်သားအားလုံးရဲ့ အခက်အခဲတွေချည်းပဲ။ ဆိုလိုတာက ဒီကိစ္စအတွက် ဒီမဲဆောက်မှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေက အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ လိုတယ်။ အဲ့လိုပဲ နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတိုင်းက လည်း တာဝန်ရှိသလို ဒီအခက်အခဲကို ကူညီလုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုပါမယ်။
မွန်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထမင်းရှင်ဘယ်သူလဲ
Submitted by admin on Thursday, 26 July 2012--
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ ရှင်စောပုလမ်းအတွင်း တရားမ၀င် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေသော အနှိပ်ခန်းနှင့် အခြား သော မြိုင်သာယာရပ်ကွက်အတွင်းရှိ တရားမ၀င် ဖွင့်လှစ်ထားသော အနှိပ်ခန်းများအား တိုင်ကြားသော်လည်း ဖမ်းဆီးအရေးယူ ဖယ်ရှား ခြင်း မရှိသောကြောင့် အွန်လိုင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် နေပြည်တော်မှ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများမှ လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက် ပေးပါရန် တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တင်ပြခဲ့ရာ ၉-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် မိုးမခအွန်လိုင်းမီဒီယာ၊ ၁၃-၇-၂၀၁၂ရက်နေ့တွင် သစ်ထူးလွင်အွန်လိုင်းမီဒီယာများတွင် ဖေါ်ပြ ပါရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ပါရှိခဲ့မှုကြောင့် ၁၅-၇-၂၀၁၂ရက်နေ့ ညတစ်နာရီခန့်တွင် မွန်ပြည်နယ် ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ အပါအ၀င် အဖွဲ့ပေါင်းစုံမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၄၀ခန့်ဖြင့် အယောင်ပြ ရှာဖွေပြခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အယောင်ပြရှာဖွေပြသောအချိန်တွင် မြိုင်သာယာရပ်ကွက်တစ်ခွင်ရှိ အနှိပ်ခန်းအသီးသီးမှာ တံခါးပိတ်၊ မီးမှိတ် ကိုယ်ဖျောက်နေခဲ့ကြပါသည်။ အချိန်နှစ်နာရီခန့် ကြာမြင့်သော အဆိုပါ အယောင်ပြ ရှာဖွေစစ် ဆေးမှု ပြီးစီးသော နံနက်သုံးနာရီအချိန်ခန့်မှ စတင်၍ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်မှာ ယနေ့ထက်တိုင် ဖြစ်ပါသည်။
မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ ရှင်စောပုလမ်း၊ အမှတ်(၄၇)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော တရားမ၀င်အနှိပ်ခန်းမှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုပါ ပူးတွဲလုပ် ကိုင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယင်းကို တိုင်ကြားပါက တိုင်ကြားသူသာ စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရခြင်း၊ အရေးယူဖယ်ရှားမှုမရှိခြင်း၊ အယောင် ပြရှာဖွေပြပီး အထက်သို့ တရားမ၀င် အနှိပ်ခန်းများ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်မှုမရှိကြောင်း တင်ပြနေခြင်းများကြောင့် ရပ်ကွက်အတွင်းနေ ပြည်သူ လူထုအနေဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထမင်းရှင်မှာ အခွန်ထမ်းပြည်သူလူထု မဟုတ်ပဲ တရားမ၀င်အနှိပ်ခန်းများ ဖြစ်နေသလားဟူသော ယူဆချက် များ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ် ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့စေပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တကွ နေပြည်တော်မှ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများမှ သေချာစွာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ၍ မွန် ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်အတွင်းရှိ တရားမ၀င်အနှိပ်ခန်းများ ပျောက်ကွယ်သွားစေရန် လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ထပ်မံ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:07 AM No comments:
၁၉ဇူလိုင်ကို မမေ့နိုင်ကြသလို သြဂုတ် ၁၂ကိုလည်း မမေ့သင့်ပါ
Posted by အဲခေါင်သောင့် at
လာမည့် သြဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ကရင်အမျိုးသား အာဇာနည်နေ့ ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ ဖြစ်ပေါ်လာရသည့် အကြောင်းကို စာဖတ် သူများအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ “ဓါးကိုဖျက်ဝါးမျက်၊ လူကိုဖျက်အရက်၊ အမျိုးသားတော် လှန်ရေးကိုဖျက် အမျိုးသားသစ္စာဖေါက်နှင့် အချောင်သမား“ အောင်ပွဲသည် တိုက်ရဲသူအတွက် ဖြစ်သည်(အာဇာနည်မျိုး သေရိုးမရှိပါ)
ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ (MARTYRS DAY)နေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
၁၉၅၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၂)ရက်နေ့သည် ဥက္ကဌ စောဘဦး ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်စိုင်းကေနှင့် အပေါင်းပါတို့သည် တော်လှန်ရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကရင်အမျိုးသားသစ္စာဖေါက် ထီးစွမ်း ရွာသား မောင်အဲ၏သစ္စာဖေါက်မှုကြောင့် နဘူးမြို့နယ် ထို ကော့ကိုးကျေးရွာအနီး လယ်တဲတတဲတွင် ရန်သူ၏ ၀ိုင်းရံပစ် ခတ်မှုများခံရရာ အင်အားမမျှသော်လည်း သူကိုယ်တိုင် ချမှတ်သည့် မူ (၄)ချက်အရ ရန်သူကို အရှုံးမပေး လက်မမြှောက်ဘဲ ရှိသည့်လက်နက်များဖြင့် ရဲရင့်ပြတ် သားစွာ ပြန်လှန်ခုခံတိုက်ခိုက်ရင်း ဂုဏ်ပြောင်မြောက်စွာ ကျဆုံးသောနေ့ဖြစ်သည်။ ထို သြဂုတ်လ (၁၂)ရက်နေ့ကို ကရင့်အမျိုးသား အာဇာနည်နေ့ဟု သတ်မှတ်လျှက် ဥက္ကဌ စောဘဦးကြီးကို ရည် ညွှန်းသည် သက်သက်မဟုတ်ဘဲ ကရင့်လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတွင် ဂုဏ်ပြောင်စွာ အသက်ပေးလှူသွား သူများအားလုံးကို ရည်ညွှန်းချီးကျူး ဂုဏ်ပြုသောနေ့ ဖြစ်သည်။
ဥက္ကဌစောဘဦးကြီးသည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၇)နေ့မှ (၁၉)ရက်နေ့အထိ ဖါပွန်မြို့တွင် ကျင်းပသော အမျိုးသားညီလာခံကို ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုညီလာခံအပြီးတွင် သူ၏ ကျော်ကြားသော ဘဦးကြီးမူ (၄) ချက်ကို တရားဝင်ရေးသားပြီး ၎င်းအချိန် မော်ချီးတွင် ရှိသည့် ကော်သူးလေ အသံလွှင့်ဌာနတွင် ကြေငြာလေ သည်။
၎င်း၏ မူ (၄)ချက်မှာ…….
၎င်းကျော်ကြားသော မူ (၄)ချက်ကို ကြေငြာပြီးသည့်နောက် အရေးကြီးကိစ္စအတွက် ကော့ကရိတ်ဘက်ဆင်း သွားသည်။ မိုးသည်ထန်စွာ ရွာသွန်း၍ ချောင်းရေများလည်းကြီးသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ တာဝန်ကို လေးစားခြင်း၊ မိမိအမျိုးသားများကို လုံးဝယုံကြည်ခြင်းများကြောင့် တပ်စိတ်တစိတ်နှင့် မိုးထဲရေထဲ ခရီးဆက်ခဲ့သည်။
ထိုအခါ နဘူးမြို့နယ်တ၀ိုက် အထူးသဖြင့် ထိုကော့ကိုးနှင့် အနီးအနားတွင် တာဝန်ကျသော ကရင်တပ်မှ တပ်ခွဲ မှူးတဦးသည် တော်လှန်ရေးလုပ်သည်မဟုတ်ဘဲ တော်လှန်ရေးဆန့်ကျင်ရေး၊ လူထုဆန့်ကျင်ရေးများစွာ လုပ် သည်။ အနီးအနားကျေးရွာများလည်း ငုံ့ခံကြလေသည်။ ထီးစွမ်းရွာသား မောင်အဲသည် ဥက္ကဌစောဘဦးကြီး ထို ကော့ကိုးကျေးရွာသို့ ရောက်သွားသော် ကောင်းစွာကြိုဆိုသယောင်နှင့် သတင်းများကို တိကျစွာယူပြီး နဘူးမြို့ရှိ ရန်သူတပ်ကို သွားရောက်သတင်းပေးရာ ရန်သူလည်းညအချိန်တွင် မိုးထဲရေထဲ အတင်းချီတက်၍ ဥက္ကဌစောဘ ဦးကြီးနေသည့် တဲကို ၀ိုင်းထားလျှက် နံနက်ဝေလီဝေလင်းအချိန်တွင် အတင်းတိုက်ခိုက်လေတော့သည်။ ဥက္ကဌ စောဘဦးကြီးသည် အင်အားနည်းသော်လည်း အညံ့မခံဘဲ ပြန်လှန်ခုခံတိုက်ခိုက်ရင်း ဂုဏ်ပြောင်စွာ အသက် ပေးလှူရသွားလေသည်။
သစ္စာဖေါက် မောင်အဲအနေနှင့် ဥက္ကဌစောဘဦးကြီးမရှိက ကရင့်တော်လှန်ရေးကျဆုံးမည်ဟုတွက်သည်။ သို့ သော်သူထင်သည့်အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ တော်လှန်သည့် သူရဲကောင်းစိတ်ဓါတ်ဖြစ်သည့် တဗိုလ်ကျ တဗိုလ်တက် စိတ်ဓါတ်ဖြင့် တရားမှန်ကန်သော ကရင့်တော်လှန်ရေးသည် ယနေ့ထိတိုင် ရန်သူ့ထံအညံ့မခံ အရှုံးမပေးဘဲ ကြံ့ ကြံ့ခံကာ တော်လှန်ရပ်တည်လျှက်ရှိသည်။
ကျဆုံးလေပြီးသော ခေါင်းဆောင်ကြီး စောဘဦးကြီးနှင့်တကွ ကရင့်တော်လှန်ရေး ရဲဘော်အပါင်းကို ဦးညွတ်ဂါရ၀ပြုလျှက်။
Statement from European Karen Network
Karen in Europe call for increased refugee aid and political solution in Burma
The third general meeting of European Karen Network ( EKN ) was successfully held in Sweden from 13 – 14 July 2012. More than 100 people from various Karen communities across Europe , including women and youths participated in the meeting.
Various issues were discussed including; problems facing different Karen Communities in Europe, how to build stronger cooperation within European Karen communities, the recent reforms in Burma, the peace process between the Burmese government and the Karen National Union, the human rights situation in Kachin and Arakan State, to raiseastronger voice for other suffering ethnic people in Burma, and to continue lobbying European governments.
European Karen Network welcomes the cease-fire agreement between Burmese Government and the Karen National Union. For many decades, the Karen people have been struggling for peace and rights to self-determination. The Burmese governments use violence against our people. Based on our past experience and as victims of human rights violations committed by the Burmese Army, we are very cautious about the situation in Karen and other ethnic areas. The Burmese Army has brokena17-year-old ceasefire agreement in Kachin State , committing human rights abuses such as raping, torturing, looting, pottering, killing, and shooting on sight.
1. EKN calls on the Burmese government to engage in dialogue with the Karen National Union for lasting political solutions that can guarantees the safety and security of the Karen people. We believe thataceasefire alone without political solution will not bring genuine peace for our Karen people.
2. EKN is deeply concerned about the exiting and proposed development projects in Karen areas. We want economic development that will benefit local people and ensure the protection of the environment.
3. EKN also calls on European governments to increase humanitarian aid especially refugee aid and cross-border humanitarian assistance for internally displaced people along the border areas.
“European Governments and the international community focus too much on the small positive changes in central Burma and prematurely reduce pressure against the dictatorship while human rights situation in ethnic areas is getting worse.” said Naw Tah Eh Shee, board member of European Karen Network and executive member of Karen Community Norway . “We have been suffering human rights abuses for decades. It is very disappointing that the EU and the rest of the international community fail to pay proper attention to what is happening in ethnic areas. They have been easily fooled by the Burmese government promising reform without yet delivering. EU and international governments should not ignore and neglect the on-going human rights situation in ethnic areas. “
The European Karen Network was set up in July 2009 with the aim to raise awareness about the situation of the Karen people of Burma , and Burma asawhole. We are the voice in Europe of the Karen struggle for freedom. We pressure European governments and the rest of the international community to do more to bring about democratic change in Burma .
Naw Tah Eh Shee ( Norway ): +47 94824532
Naw A Nge Ma ( Sweden ) + 46 761189263
Mary Hla ( UK ): +44 7853287330
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:56 AM No comments:
သြစတြေးလျား ကရင်အစည်းအရုံး(AKO) အစည်းအဝေးကြီး ပြီးဆုံး
Posted by အဲခေါင်သောင့် at 6:35 PM
အဲခေါင်သောင့်၊ ဇူလိုင် ၂၆ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်
နှစ်နှစ် တကြိမ် ပြုလုပ်သည့် သြစတြေးလျား ကရင်အစည်းအရုံး (AKO)၏ အစည်းအဝေးကြီးကို လွန်ခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၂၀ရက်ကနေ ၂၂ရက်နေ့အထိ သြစတြေးလျား မြို့တော် ကမ်ဘာရာမြို့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးကြီးသို့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အလိုက် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး လာမည့် ၂၀၁၂-၁၄အတွက် ကော်မတီသစ်တွေကိုလည်း ပြန်လည် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဥက္ကဌ စောလွင်ဦး၊ ဒု ဥက္ကဌ-၁မန်းအော်လန်းဒို၊ ဒု ဥက္ကဌ ၂-စောထိုလွီးဝါး၊ အတွင်းရေးမှူး စောဒန်းနရယ်ဇူး အပါအ၀င် ၂၀၁၂-၂၀၁၄ အတွက် AKO ကော်မတီသစ်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ။ ဓါတ်ပုံ -Might Dar
NLD အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဝင်များမှ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ၊ပွင့် ဖြူမြို့နယ် ၊ သမန်းအင်းကျေးရွာတွင် ဇူလိုင်လ ၂၅
ရက်နေ့နံနက်- ၉း၃၀ နာရီ ခွဲ အချိန်ခန့်တွင် လူသတ်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွား ခဲ့ပါသည်။
သမန်းအင်း ကျေးရွာ မြောက်ဘက် တွင်ရှိ ဦးလက္ခဏ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ဆောက်လုပ် သည့်နေရာမှ ရွာသို့ ပြန်လာခဲ့ ကြသော အမျိုးသားဒီမို ကရေစီ
အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးရဲဝင်းနှင့် ဦးကြည်မောင်တို့အား ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဦးဝင်းမောင် ခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် ( ၈)ဦးခန့်မှ ၄င်းတို့နှစ်ဦးအား
အပြန်စောင့်ဆိုင်းပြီး ဓားရှည်မျိုးစုံ ဖြင့် ထိုးခုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ဦးရဲဝင်းမှာ ဦးခေါင်းပိုင်းပတ်လည် (၁၀ )ချက်နှင့် ညာဘက်လက်မောင်းမှာ
ဒါဏ်ရာကြောင့် ပြတ်လုနီးပါး ဖြစ်နေပါသည်။
ဦးကြည်မောင်၏ လက်တစ်ဖက်ရှိ လက်ချောင်းများမှာလည်း ပြတ်တောက်ခဲ့ပါသည်။
ဦးရဲဝင်းမှာ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း Myanmar News Now မှ
ယင်းဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သိ အကြောင်းအရာများအား ပွင့်ဖြူရဲစခန်းသို့အမှုဖွင့်
တိုင်ကြားခြင်းကိုဦးရဲဝင်း ၏ ဇနီးဖြစ်သူမှ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရဲစခန်းမှ ပ/ ၅၄-ပုဒ်မ ( ၃၀၂) ( ၁ ) ( ခ) အရ၄င်း ပုဒ်မ၃၂၆-၁၄၄
အရ၄င်း အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသတင်းရ ရှိပါသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်နေ့ က ပွင့်ဖြူ NLD အဖွဲ့ ဝင်များ ချီတက်အလေးပြုခဲ့စဉ်
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:50 AM No comments:
ဂျပန်နိုင်ငံ TOKYO မြို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားများနှင့်ဂျပန်လူမျိုးများပူးပေါင်းပြီး NPO PEACE ကိုဖွဲ့စည်းပြီးစီးခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ TOKYO မြို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားများနှင့်ဂျပန်လူမျိုးများပူးပေါင်းပြီး NPO PEACE
(၁၅-၇-၂၀၁၂)နေ့က WASEDA HOSHIEN ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်၊၊
NPO PEACE သည်ဂျပန်ပြည်တွင်းနှင့်မိမိ ဒေသတွင်းတိုးတက်ရေးများကိုလုပ်ဆောင်သွား
Director အဖွဲ့ဝင်ရှစ်ယောက်နှင့်ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားသော၎င်း NPO တွင်တိုင်းရင်းသားလေးယောက်
မရစ်ဆိုင်းဘူ ( ကချင် )
စောဘလှသိန်း ( ကရင် )
ထန်နိုင်လျန်းထန် ( ချင်း )
အောင်ဘ ( နာဂ )
Mr- Uemura Masayoshi
Mr-Kojima Takayuki နှင့်
ရှေ့နေကြီး Mr- Watanabe Shogo တို့ဖြစ်သည်၊၊
ဒါရိုက်တာများ၏တာဝန်ခံအဖြစ် မရစ်ဆိုင်းဘူ ( ကချင် )နှင့်ဒုတာဝန်ခံ စောဘလှသိန်း ( ကရင် )နှင့်
Mr- Uemura Masayoshi တို့ကိုရွေးချယ်ထားကြောင်းသိရှိရသည်၊၊
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၅ ဂွင်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်
ကရင်ပြည်နယ်ဖာပွန်မြို့ နယ် ကတိုင်တိအခြေစိုက် နယ်ခြားစောင့်တပ် ၁၀၁၃ တည်ဆောက်ရေးနှင့် စစ်ရေး မဟာဗျူဟာအရ သုံးရာဆက်တိုက်ဖေါက်လုပ်နေသောလမ်း နေရာကို ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၅ မှ တပ်ဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ က ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ မြေထိုးစက်နှစ်စီးကို ဖေါက်ခွဲဖျက်စီးလိုက်တယ်လို့ ဒေသခံက ပြော ပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:52 AM No comments:
မြန်မာစစ်တပ်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူလက်မှတ်ထိုး ထားတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာ တပ်အင်အား တိုးချဲ့ခြင်း၊ ရိက္ခာများ အလွယ်တကူပို့ဆောင်နိုင်ရန် လမ်းဖေါက်လုပ်ခြင်း စတာတွေကို ရိုးသားမှုမရှိတဲ့ ကလိမ်ကကျစ်စိတ်အရင်းခံနဲ့ လုပ်ဆောင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့ တိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာ ဆက်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်နေရုံသာမက ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရန်စနေဆဲမို့ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေရဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလည်း ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့ နယ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ ကတိုင်တိအခြေစိုက် ရုပ်သေးနယ်ခြားစောင့်တပ် ၁၀၁၃မှ သုံးရက်ဆက်တိုက်ဖေါက်လုပ်နေသောလမ်း နေရာကို ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၅ တပ်ဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ က ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ မြေထိုးစက်နှစ်စီးကို ဖေါက်ခွဲဖျက်စီးနိုင်လိုက် တယ်လို့ ဒေသခံများရဲ့ အဆိုအရ သိရပါတယ်။
ယခုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆက်ဆံရေးရုံးခန်းထဲ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစရာရှိပေမဲ့ မတရားမှုကို တွန်းလှန်တဲ့ KNU အဖွဲ့အစည်းဟာ မိမိတို့ ရပ်တည်ချက်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှာသာ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံတွေက ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:47 AM No comments:
ဟာဂျီကျော်ခင် (ခေါ်)၀န်ကြီးကျော်ခင် မှ သီတာထွေးအမေကို ပိုက်ဆံ ဆယ့်ငါးသိန်းပေးပြီးကျေအေးခိုင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးတွေမှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးကျော်ခင်တစ်ယောက် ကျောက်နီမော်တွင် မုဒိန်းကျင့်ခံရသော သီတာထွေးရဲ့ အမေကို ကုလားဗလီဆရာများရှေ့ကို ခေါ်ပြီး ဟာဂျီကျော်ခင် (ခေါ်)၀န်ကြီးကျော်ခင် မှ ဗလီဆရာထံမှ ပိုက်ဆံ ဆယ့်ငါးသိန်းကိုယူပြီး သီတာထွေးအမေကို ယော့ ဒါဆိုကျေနပ်တော့နော်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ရာ သီတာထွေး ၏မိခင်က ကျွန်မ၏သမိးမှာ ဈေးမှာရောင်းနေတဲ့ကုန်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းပြောပြပြီး ပိုက်ဆံကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလို ပိုက်ဆံပေးပြီးကျေအေးခိုင်းတဲ့ ဟာဂျီကျော်ခင် ကို ရွာသားတွေကမကျေမနပ်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ သီတာထွေး အမေမှာလည်းတစ်နေ့တစ်နေ့ဟိုကခေါ်စစ်ဒီကခေါ်စစ်နဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း မနေရဘူးဖြစ်တယ်လို့ ရွာသားတစ်ဦးကပြောပြပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:44 AM No comments:
ကရင်ဘာသာ ရုပ်သံသတင်း (ဇူလိုင်လ တတိယပတ်)
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:41 AM No comments:
ဂျပန်တွင် စတင်ကျင့်သုံးတော့မည့် Zairyu Card နှင့် သိသင့်သိထိုက်သည့် အကြောင်းအရာများ
၇ လပိုင်း ၉ ရက်နေ့မှာ စတင်အသက်ဝင် ကျင့်သုံးတော့မယ့် Zairyu(သို့) I.CCardကဒ်အကြောင်း မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုရော ဒီဥပဒေအသစ်အပေါ် သုံးသပ်ရေးထားထားတဲ့ Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Card အကြောင်းသိကောင်းစရာများ အပါအ၀င် ဂျပန်ရောက်မြန်မာများအားလုံး သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်အလက်များကို မိုးသောက်ကြယ် ဂျာနယ်မှ အစဉ်တစိုက်ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့တာ သတိထားမိကြမှာပါ။
၇-၉ဥပဒေသစ်ဟာ တောင်မင်း မြောက်မင်း မကယ်နိုင်လောက်အောင် တင်းကြပ်တော့မှာဖြစ်လို့ ဂျပန်ရောက် မြန်မာများအားလုံး အထူး သတိ ၀ီရိယရှိကြဖို့၊ မပေါ့ဆကြဖို့တဲ့ ဒီဥပဒေသစ်ရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်များကို လေ့လာမှတ်သားပြီး မိမိအနေနဲ့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ..။ ဘာတွေဆောင်ရမယ်၊ ဘာတွေရှောင်ရမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စေတနာအမှန်နဲ့ တင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
၇-၉ဥပဒေသစ်နှင့် ပတ်သက်လို့ မေးလာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပြန်လည်ဖြေဆိုပေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို အများသိရှိသဘောပေါက်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(က)ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ ဗီဇာအမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသလဲ။ (ခ)ခုချိန်မှာ ဒုက္ခသည်လျှောက်မယ်ဆိုရင် ရနိုင်ပါသလား။
(ဂ)ဒုက္ခသည်အဖြစ် နေထိုင်ခွင့် ရရှိထားသူတွေအနေနဲ့ ၇-၉ ဥပဒေချိုးဖျောက်မိရင်ရော ပြန်ပို့ခံရမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား...
ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ ဗီဇာအမျိုးအစား အခြေခံအားဖြစ် ၇ မျိုးရှိပါတယ်။
နားလည်အောင် ဇယားကွက်နဲ့ ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်
Visa Category Status of Residence term of Residence
(1)Diplomatic Visa Diplomat during mission
(2)Official Visa Official during mission
(3)Working Visa Professor
Inter company Transferee
(4)Temporary Visitor's Visa Temporary Visitor#
(5)Transit Visa Temporary Visitor#
(6)General Visa Cultural Activities#
Pre college Student#
(7)Specified Visa Designated Activities+
#Statuses of residence not Permitting work.
မှတ်ချက်- Permanent Resident ဖြစ်သွားပါက ဗီဇာသက်တမ်းတိုးစရာမလိုတော့ပါ..
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကတည်းက ဂျနီဗာကွန်းဗင်းရှင်းစာချုပ်ထဲမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်လျှောက်တာကို လက်မခံဘူးဆိုတာ လုပ်လို့မရပါဘူး။ အသိအမှတ်ပြုမယ် မပြုဘူးဆိုတာပဲ လုပ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့နဲ့ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဆရာ Watanabe ရှင်းပြချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်ကြည့်ပြီး ဂျပန်လ၀ကအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားတဲ့ မြန်မာတွေကို အရင်လိုမျိုးဘုန်းပေါလအော အလွယ်တကူအသိအမှတ်ပြုတော့မှာ မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာမှုကြောင့်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ Designated Activities ဗီဇာလည်း ရရှိဖို့ ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။
(လုံးဝမရတော့ဘူးဟု မသတ်မှတ်ကြပါနဲ့။ ယခုလဆန်းပိုင်းအတွင်းကပဲ မြန်မာတစ်ဦး ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပါတယ်။ နာမည်မဖော်ပြတော့ပါ)
အမိနိုင်ငံပြန်ရင် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရမှာဆိုးလို့(ဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အသင်းအဖွဲ့၊ လူမျိုးနွယ်စု၊ အခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ)ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသူများအနေနဲ့ ၇-၉ ဥပဒေသစ်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း တွေ့ရှိတယ်။ လိုက်နာခြင်းအလျဉ်းမရှိဘူး..ဆိုရင် အများနည်းတူ ပြန်ပို့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် ဥပဒေသစ်ထဲမှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဒုက္ခသည်ဗီဇာ၊ လက်ထပ်ဗီဇာ၊ အထူးနေထိုင်ခွင့်(S.S)ဗီဇာ၊ Work Mermit ဗီဇာအစရှိသည်တို့ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြား၍ ရယူထား ကြောင်းကို တိုင်ကြားခံရလျင်သော်လည်းကောင်း(သို့တည်းမ ဟုတ်) စုံစမ်းတွေ့ရှိလျင်သော်လည်းကောင်း လဝကအရာရှိများမှ ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်မှန်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရုပ်သိမ်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ် လို့ အသိပေးထားပါတယ်။
သိထားရမယ့်အချက်က သင်ဟာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလောက်တဲ့ အကြောင်းအချက်ညီညွတ်လို့၊ ခိုင်လုံလို့ ဂျပန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက အသိအမှတ်ပြုထားတာ မှန်ပေမယ့် ဥပဒေချိုးဖောက်ရင် ဂျပန်နိုင်ငံသားနည်းတူ အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမယ်လို့ အစောကြီးကတည်းက ပြောဆိုထားပါတယ်။
အခု ၇-၉ ဥပဒေသစ်မှာတော့ အရေးယူအပြစ်ပေးခံတဲ့အဆင့်ထက်ကျော်လွန်သွားပါက ပြည်တော်ပြန်ပို့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်..
ရောမရောက်ရင် ရောမလိုကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသူ/သားများအားလုံး ဇူလိုင်လ ၉ ရက်(တနင်္လာနေ့)မှာ စတင်အသက်ဝင်ကျင့်သုံးတော့မယ့် ဇိုင်းလျူးကဒ်စနစ်သစ်အရ အမှားအယွင်းမရှိအောင်နေထိုင်ကျင့်ကြံစေလိုပါတယ်..။
ကာယသုက္ခ၊ စိတ္တသုက္ခများနှင့်ပြည့်စုံပြီး မိမိရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ရောက်သည်အထိ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓါတ်မွေးကာ သတိရှိရှိနဲ့ ၇-၉ ဥပဒေသစ်ကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်-
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:40 AM No comments:
နိုင်ငံခြားများကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်တွယ်တော့မယ့် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Card အကြောင်း
ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး အသက်ဝင်ကျင့်သုံးတော့မယ့် နိုင်ငံခြားများကို စက်ရုပ်များသဖွယ် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်တွယ်တော့မယ့် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Card အကြောင်းကို မိုးသောက်ကြယ်အယ်ဒီတာမင်း (ဦး)စိုးဝင်းရှိန်က
ဥပေဒေပြဌာန်းဖို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ အတည်ပြုပုံနှင့် အတည်မပြုမီ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာသောသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အားနည်းချက် အားသာချက်များနှင့် သတိထားသင့်သည့်အချက်များကို စေ့စေ့ငုံငုံပြုစုထားတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ခုပါ။
အပြည့်အစုံကိုတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖော်ဖော်ဝါရီလထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ(၉)၊ အမှတ်(၂)မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ယခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၉)နေ့ တနင်္လာနေ့မှစပြီး အသက်ဝင်တော့မည်ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ နိုင်ငံခြားသားများကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လဝက)မှ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်တော့မည့် ဥပဒေ သစ်( Zairyu Card(သို့) IC Card(Residential Card-နေ ထိုင်ခွင့်ကဒ်)ကြောင့် ဂျပန်ရောက်မြန်မာများအကြား ဘာတွေဖြစ်လာ တော့မှာလဲ။ ဒီဥပဒေသစ်ကို ဘယ်သူတွေက ဘာသဘောနဲ့ ပြဌာန်းတာ လဲဆိုပြီး မေးတာမြန်းတာတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာတွေများနေလျက်ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဥပဒေပြဌာန်းတော့မယ်လို့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်မှာ မူကြမ်းတင်သွင်းသည့်အချိန်မှစ၍ အသက်ဝင်အတည်ပြုပြီးသွားသည့်အထိ ကျနော်လေ့လာသုံးသပ်ထားမှုများကို အားလုံးနားလည်အောင် စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ယခုလို နိုင်ငံခြားသားများကို တင်းကြပ်မယ့်ဥပဒေသစ်ကို ဂျပန်အစိုးရ က မနေ့တနေ့ကမှ ကောက်ခါငင်ကာ သတ်မှတ်ပြဌာန်းလိုက်တာ မ ဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဥပဒေပြဌာန်းဖို့ကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် လဆန်းပိုင်းကတည်းက လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီLDP(အဆိုပါအချိန်တုန်းက အာဏာရ အစိုးရဖြစ်ပြီး ယခုအတိုက်အခံပါတီ)က အထက်လွှတ်တော်ကို တင် သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တင်သွင်းရတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကတော့-
ပြည်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးကို ပိုမိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ့် ဝန်ဆောင်မှု မျိုးနှင့် အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်မည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ရန်မှ ကာကွယ် နိုင်ရန်အတွက်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရရှိထားသူ နိုင်ငံခြားသားများ၏အခြေအနေကိုလည်း ဗဟိုအစိုးရမှ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ် ပြီး ဘာတွေလုပ်နေတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့ဘယ်မှာနေထိုင်နေတယ် (ဟန် ဆောင်လက်ထပ်ထားခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်) ချမှတ်ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနှင့်ညီလျော်စွာ နေ-မနေ(ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်ခြင်းရှိ-မရှိ)ပေးဆောင် ရမည့် ဝင်ငွေခွန်(အခွန်ဆောင်-မဆောင်)နဲ့ အစိုးရအပေါ် လိမ်လည်ပြီး နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခြင်းရှိ-မရှို(ဗီဇာအတုပြုလုပ်ခြင်း၊ လိမ်လည်ပြီး နေထိုင်ခွင့်ရ ယူထားခြင်း၊ ထောက်ပံ့ကြေးယူပြီး အလုပ်ခိုးလုပ်နေခြင်း၊ သတ်မှတ်ချိန် ထက်ကျော်လွန်ကာ အလုပ်လုပ်နေခြင်းနှင့် work Permitt Visa ဖြင့် တခြားတနေရာတွင် တရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင် နေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်)တို့ကို အလွယ်တကူစုံစမ်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် လို့ ဆိုပါတယ်။
LDPပါတီက ရေးဆွဲတင်သွင်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်ကို လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DPJ(အဆိုပါအချိန်တုန်းက အတိုက်အခံပါတီအဖြစ်နှင့်သာ တည်ရှိသေး)နဲ့ New Komeito(ဘုန်းကြီးပါတီ) ပါတီတို့က သဘောတူထောက်ခံခဲ့လို့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်(၁၅)ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ဆင်လိုက်သော ဥပဒေသစ်အရ လက်ရှိကိုင်ဆောင်နေတဲ့ နိုင် ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေး၏ထိန်းချုပ်မှုပုံစံနှင့် နေထိုင်မှုမှတ်ပုံ တင်ဥပဒေများကို လုံးဝပြောင်းလဲပစ်မှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ အားလုံးကို ဗဟိုအစိုးရက ကိုင်တွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုကျိုဌာနအပါအဝင် များစွာသောဒေသတွင်းရှိ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ရုံးများတွင် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂလိကအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ လူဝင်မှု ရေးရာမူဝါဒဌာန၏ အထွထွေညွှန်ကြားရေးမှူး ဟီဒေးနို ရိဆာကာ နာကာ(ံငိနညသမငှေုညေေုေ)ဆိုသူက ''ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်ဥပဒေတွေက အတော်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဥပဒေလိုက်နာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်...''လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရာ၌ ကူညီခဲ့သူ DPJမှ ဥပဒေပြုပုဂ္ဂိလ် 'ရီဆူအို ဟို ဆိုကာဝါ'ကတော့ ''နိုင်ငံခြားသားတွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ၊ ဘယ်မှာနေ လဲဆိုတာတွေ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေစုစည်းပြီး တရားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှာ ထားရှိဖို့လည်း အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ သာမန် ဂျပန်ပြည်သားတစ်ဦးလိုပဲ ဥပဒေလိုက်နာပြီး ကောင်းကောင်းမွန် မွန်နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ပြန်ပို့မခံရအောင် ဒါမှမဟုတ် ပုန်း လျှိုပြီး မနေရအောင် ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ''လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
ဂျပန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာန အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ ထုတ်ပြချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် နိုင်ငံခြားသား ၂ သန်း ၃ သိန်းကျော်ရှိပြီး အထောက်အထားမဲ့ နေထိုင်သူ ၁၁ဝ,ဝဝဝ ရှိနေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
I.Cမလာခင် S.S Guide Lineပဌာန်း
နိုင်ငံခြားသားများကို တင်းကြပ်မယ့်ဥပဒေသစ်ကို အတည်ပြုပြဌာန်း ခဲ့ပြီး တလအကြာမှာတော့ ထိုစဉ်က ဂျပန်တရားရေးဝန်ကြီး Eisuke Mori ဆိုသူက ဂျပန်နိုင်ငံတဝှမ်း တရားမဝင်နေထိုင်နေကြသည့် နိုင်ငံခြား သားများအတွက် အနည်းငယ်အသက်ရှုချောင်စေပြီး ပျော့ပြောင်းတဲ့ အထူးနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ(S S Guide Line Visa)ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့-
(၁)ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့သော မိမိ၏သားသမီး(အစစ်အ မှန်ဖြစ်ရပါမည်)သည် အသက်(၁ဝ)နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိနေပြီး ဂျပန် ကျောင်းများဖြစ်သည့် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ကျောင်းများတွင် ပညာသင်နေသူဖြစ်ပါက အဆိုပါမိသားစုဝင်များ အထူးနေထိုင်ခွင့်လျှောက်မည်ဆိုလျှင် လူသားချင်းစာနာသော အားဖြင့် အထူးသက်ညှာစွာစဉ်းစားပေးမည်။
(၂) နာမကျန်းဖြစ်နေသည့် ကြီးမားသည့်ရောဂါရှိနေသဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဆေးကုသဖို့ လိုအပ်နေသူများ။(နှားစီး၊ အအေး မိ၊ ချောင်းဆိုး၊ ဗိုက်နာ၊ ခေါင်းနာ၊ ဟန်ဆောင်နာများမရပါ)
(၃) အိုဗာစတေးအဖြစ် အနှစ်(၂ဝ)ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ၄င်းကာလ အတွင်း ပြစ်မှုတစ်စုံတရာကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ထားခြင်းမရှိပဲ အေးဆေး ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခဲ့သူများ၊
ဂျပန်တရားရေးဋ္ဌာနမှထုတ် ပြန်ထားသောအချက်ထဲတွင် 'ပြစ်မှု' ဆိုရာ၌ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရပ်များ (ဥပမာ-ခိုးမှု၊ ဝှက်မှု၊ လိမ်လည်လှည့်ဖျားနေမှု၊ လူကုန်ကူးခြင်း၊ ပြည်တန်ဆာ လုပ်ငန်း၊ လောင်းကစားလုပ်ငန်း၊ တရားမဝင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်း၊ မသမာ သောနည်းလမ်းများဖြစ် စီးပွားရှာနေခြင်းများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်/သုံးစွဲမှု၊ ဒုစရိုက်မှုအစရှိသဖြင့်)လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိပါက အိုဗားစတေးအဖြစ် အနှစ် ၂ဝ ကျော်နေထိုင်ခဲ့သော်ငြား လည်း လူသားချင်းစာနာသောအားဖြင့် အထူးအနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပေ။
(၄) မိမိဟာ တရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်နေသော်ငြားလည်း အမြဲ တည်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိထားသူ(Long Term Resident)၊ ဂျပန်နိုင်ငံသားခံ ယူထားသူ၊ သို့မဟုတ် ဂျပန်လူမျိုးနှင့်လက်ထပ်ထားသူများ။(ဟန်ဆောင်လက်ထပ်ထားခြင်းမျိုးမရပါ)
အဆိုပါအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ တရားမဝင်နေထိုင်နေကြသည့် နိုင်ငံခြားသားများတွေ လဝကမှာ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အထူးနေထိုင်ခွင့် ဗီဇာ လာလျောက်မယ်ဆိုရင် အသိအမှတ်ပြုပေးမယ်လို့ တရားရေး ဝန်ကြီးက ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁ဝ)ရက် တနလာင်္နေ့မှာ ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
(အပြည့်အစုံကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထုတ် မိုးသောက်ကြယ် ဂျာနယ် အတွဲ(၆)၊ အမှတ်(၉)မှာ ''ွှကငိနူငညန အသစ်ထုတ် ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်၊ အနှစ်(၂ဝ)ကျော် အိုဗာစတေး သမား များ ပြစ်မှုကျုးလွန်ခြင်းမရှိမှသာ လျှောက်ထားနိုင်''ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးသားထားခဲ့မှုမှာ ပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်)
ထို့အတွက်ကြောင့် မြန်မာအပါအဝင် တစ်ခြားနိုင်ငံက နိုင်ငံခြားသား တွေလည်း ဖော်ပြပါ အချက်(၄)ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့လူမှန်သမျှကို လူသားချင်းစာနာသောအားဖြင့် အထူးနေထိုင်ခွင့်(S S Visa)တွေ ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
(ကျနော့်အမြင်အရ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဂျပန်ဟာ လူကြီးလူကောင်းဆန် ကြောင်း ပြသတဲ့အနေနဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားများကို တင်းကြပ်မယ့် ဥပဒေသစ်ပြဌာန်းတော့မယ်လို့ ၆ လကျော်ကြာ ကြိုတင်အသိပေးပါ တယ်။ ပြဌာန်းခဲ့ပြီးနောက် အလွန်တင်းကြပ်လွန်းလှတယ်လို့ ဝေဖန်သံ တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတဲ့ အလျော့အတင်းသဘောမျိုး လူသားချင်း စာနာပါတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ အထူးနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာတွေထုတ်ပေးပြီး နာမည်ကောင်းပြန်ယူပါတယ်။ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေလိုမျိုး ဥပဒေ ကိုအခုထုတ် အခုလုပ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်သလို ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေကို လည်း လိုတစ်မျိုး မလိုတစ်မျိုး မလုပ်တာတော့ လေးစားချီးကျူးစရာပါ)
S S Guide Line ပြီးတော့ Point Systemစနစ်
ဒီအကြောင်းကိုလည်း ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ အထူးသတိထားသင့်ပါ တယ်။
-၉ နေ့မှာ စတင်အသက်ဝင်ကျင်သုံးတော့မယ့် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Card အပိုင်း(က)မှာ ဒီဥပဒေပြဌာထမ်းဖို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ပြဌာန်းရခြင်းရွယ်ချက်နဲ့ မပြဌာန်းခင်မှာ အလျော့အတင်းပြုလုပ်တဲ့ဥပေဒသစ်(S S Guide Line)အကြောင်း ရှင်းပြပေးထားတာကို အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကိုလည်း ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ အထူးသတိထားသင့်ပါ တယ်။ Point Systemဆိုတာဘာလဲဆိုရင် ဗီဇာသက်တမ်းတိုးတဲ့အခါ-
(က)သူ့နိုင်ငံ(ဂျပန်)ကိုအကျိုးပြုတဲ့လူ (အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာ ရှင်နဲ့ ဥပဒေဘောင်တွင်းနေထိုင်သူ(ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိသူ၊ ဂျပန်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောက်အယှက်ပေးခြင်းမရှိသူ(မူး ရူး ဆိုးသွမ်း ရမ်းကားနေခြင်းမရှိသူ)၊ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်တဲ့လူ အစရှိ သဖြင့်) မှန်သမျှကို လျောလျောလျူလျူနဲ့ ဗီဇာအမြန်ဆုံး ထုတ်ပေး မည့်အပြင် ဗီဇာသက်တမ်းကိုလည်း ၃ နှစ်မှ ငါးနှစ်အထိ တိုး မြှင့်ပေးမယ်လို့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
Point Systemစတော့မယ်ဆိုတာကို တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြိုတင်အသိပေးတာက ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၉)ရက် သောကြာနေ့က ဖြစ်ပြီး အမှန်တစ်ကယ်အတည်ပြုပြီး စတင်ကျင့်သုံးအကောင်အထည် ဖော်တယ်လို့ ကြေညာလိုက်တာက ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁၁)ရက် တနလာင်္နေ့ က ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်း ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ(၆) အမှတ်(၇) စာမျက်နှာ (၂ဝ)နဲ့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ(၈) အမှတ်(၇) စာမျက်နှာ (၁၅)မှာ အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အကျဉ်းချုံးပြန်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် Point System (အမှတ်ပေး စံနစ်)ဆိုတဲ့အတိုင်း ၁ဝဝ ပွိုင့်အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး မိမိရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု အပေါ်မူတည်၍ အမှတ်တိုးတာ အမှတ်လျော့တွေ ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးရှင်းပြရရင် ပြစ်မှုမကျူးလွန်ဘူး၊ ရဲစခန်းမှာလည်း အမှုဖွင့် ဆိုခံထားရခြင်းလည်းမရှိဘူး၊ ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်လည်း အကျိုးပြုတယ်၊ ဥပဒေဘောင်အတွင်း နေထိုင်တဲ့လူမှန်သမျှကို အမှတ်တွေတိုးပေးပြီး ဗီဇာသက်တမ်းကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
ဂျပန်စကား တက်မြောက်မှုအဆင့်အပေါ်ကြည့်ပြီး အမှတ်တိုးပေးမယ်လို့လည်း ဆို ထားပါတယ်။
ဂျပန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် အထောက်အကူမပြုပဲ နှောက်ယှက်နေ တဲ့လူ၊ ဥပဒေကိုလည်း လေးစားလိုက်နာမှုမရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ ကျူး လွန်ခဲ့တဲ့ အမှုများကို သုံးသပ်ပြီး ဗီဇာအလျော့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကိုလည်း ရှင်းလင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် မူးရူး ဆိုးသွမ်း ရဲကားနေ လို့ ပတ်ဝန်းကျင်က ရဲကိုအတိုင်ခံရတဲ့လူ၊ ဒုစရိုက်မှု ကျူးလွန်သူမှန်သမျှ ဗီဇာအလျော့ခံရမှာပါ။
ကျနော်တို့မြန်မာတွေထဲမှာလည်း သက်တမ်းသွားတိုးတာ ဗီဇာ အလျော့ခံရတယ် ဗီဇာအလျော့ခံရတယ်ဆိုတဲ့အသံတွေ ကြားမိမှာပါ။ ရဲမှုဖြစ်ခဲ့သူမှန်သမျှ ဗီဇာအလျော့ခံမှာဖြစ်သလို ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ သူမှန်သမျှ ဗီဇာအလျော့ခံရတဲ့အပြင် ပြည်နှင်ဒဏ်ပါ ပေးခံရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ (တရားမဝင် ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုကြောင့် မြန်မာနှစ်ဦးကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တုန်းက ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရတယ်ဆိုတာ လူအတော်များများ သိကြမှာပါ။ နာမည်တွေတပ်မရေးတာက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်မှာဆိုးလို့ပါ)
ဒါကြောင့် သတိထားရမယ့်အချက်က ရဲမှုမဖြစ်အောင် သတိထားကြဖို့ လိုပါတယ်။
မြန်မာအများစုဟာ အရက်မူးလာတဲ့အခါမှာ အလုပ်ဒါဏ်၊ အပြင်ဒါဏ်၊ အတွင်းဒါဏ်၊(အသည်းကွဲ၊ အလုပ်အဆင်မပြေခြင်းကို ဆို လိုခြင်းဖြစ်သည်) အိမ်လွမ်းဒါဏ်စတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ထွက်ပေါက်ရှာ တဲ့အနေနဲ့ အရက်ဆိုင်တွေ၊ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ၊ နိုက်ကလပ်တွေမှာ အချင်းချင်း(သို့)တစ်ခြားလူတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အချင်းချင်းဖြစ် လို့ ပွဲပြီးသွားရင် ကိစ္စမရှိပေမယ့် ရဲကိုခေါ်ပြီးမှ ရဲမှုဖြစ်သွားပြီဆိုရင် အဲဒီ့လူ အမှတ်လျော့သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် သက်တမ်းတိုးတဲ့အခါမှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒါဏ်နဲ့ ရဲကပေးပို့ထားတဲ့ အမှုတွေကိုစစ်ဆေးပြီး ဗီဇာအလျော့ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် မိမိဟာ အမည်ပျက်စာရင်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ဗီဇာအ လျော့ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ- ရေ၊ မီး၊ ဖုန်းဖိုးများ မဆောင်မှုကြောင့် အတိုင်ခံရခြင်း၊ အလုပ်လိမ်လုပ်နေကြောင်း အတိုင်ခံရခြင်းနဲ့၊ ဗဟိုအစိုးရ ထံမှ ဗီဇာကိုလိမ်လည်ပြီးရယူရထားခြင်းတို့ကို အတိုင်ခံရသူများ၊ ကားမောင်း၊ စက်ဘီးစီး၊ လမ်းကူးရတွင် လိုက်နာမည့်စဉ်းမျဉ်းကို မလိုက်နာပဲ ချိုးဖောက်သူများ၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၇)တွင် ဖော်ပြပြီး)
နိဂုံး(သို့မဟုတ်) Zairyuu Cardအကြောင်းအစ
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ရေးရမယ်ဆိုရင် ဂျပန်အစိုးရဟာ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ တနလာင်္နေ့မှာ စတင်အသက်ဝင်ကျင့်သုံးတော့မယ့် နိုင်ငံခြား သားများကို ဗဟိုအစိုးရမှချုပ်ကိုင်ပြီး ၇-၉ ဥပဒေ(၇ ပိုင်း ၉ ရက်) Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Card(Residential Card-နေထိုင်ခွင့်ကဒ်)အ ကြောင်း စတင်တော့မယ်ဆိုတာ3နှစ်ကြိုတင်ပြီး အသိပေးထားသလို အလျော့အတင်းတွေလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါကြောင့် ၇-၉ မှာ စတင်ကျင့်သုံးတော့မယ် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardဆိုတာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းနေထိုင်မယ့်သူတွေအတွက်နဲ့ ချ မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် ဘာမှကြောက် စရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
တစ်ခုပဲရှိတာက အခုကျင့်သုံးမယ့် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardကို ဂျပန်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်သာ ကျင့်သုံးမှာဖြစ်ပြီး ဂျပန်လူမျိုးနဲ့ ဂျပန်ဖွားကိုရီးယားလူမျိုးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ သားခံယူထားသူတွေကိုတော့ ပ,လှပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
ဒါဟာ လူတန်းစားခွဲခြားမှုတစ်ခုဖြစ်လို့ အားလုံးက ဝိုင်းကန့်ကွက်နေ လျက်ရှိပါတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း ၇-၉ ဥပဒေဟာ လက်ရှိအာဏာရ အစိုးရရော၊ အင်အားကြီးအတိုက်အခံပါတီနှစ်ခုကပါက သဘောတူ လက်ခံပြီး အတည်ပြုပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် လိုက်နာရုံမှတစ်ပါး ရွေးစရာ တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာများဟာ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မတ်လထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ(၆) အမှတ်(၃)တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ကစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ 'နေထိုင် ခွင့်ချထားရေးဆိုင်ရာ စနစ်သစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာလမ်းညွန် လက်စွဲစာအုပ်'မှလည်း ကောက်နှုတ်၍ ဖြည့်ဆည်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardဆိုတာဘာလဲ...
ကွန်ပျူတာတွင် နိုင်ငံခြားသားစာရင်းထည့်ပြီး ယခင်နိုင်ငံခြားသား ကဒ်နေရာတွင်အစားထိုး၍ အသုံးပြုမည့်စနစ်သစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ကဒ်ဖြစ်သည်။ ယခင်က နိုင်ငံခြားသားကဒ်ကို သက်ဆိုင် ရာမြို့နယ်ရုံးများကထုတ်ပေးပြီး ယခုစနစ်သစ်တွင် လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးဋ္ဌာနမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
၇-၉ မှာ စတင်အသက်ဝင်ကျင့်သုံးတော့မယ့် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardအကြောင်းကို မောင့်ရှင့် ဖဘ ကနေ အပိုင်း(၃)ပိုင်းခွဲပြီး ဥပေဒေပြဌာန်းဖို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ အတည်ပြုပုံနှင့် အတည်မပြုမီ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာသောသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အားနည်းချက် အားသာချက်များနှင့် သတိထားသင့်သည့်အချက်များကို အားလုံး အလွယ်တကူနဲ့ ဖော်ပြလာပေးခဲ့တာ အခုပို့စ်ဟာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်..။
ဘယ်သူတွေကို ထုတ်ပေးပြီး ဘယ်သူတွေ ကင်းလွတ်ခွင့်ရလဲ..။
ဘယ်သူတွေကိုတော့ ထုတ်ပေးမှာ မဟုတ်ဟု ပြဌာန်းထားသလဲ
I.C ထဲက အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီး လဝက ကဘာလုပ်နိုင်မည်လဲ...
အပါအ၀င် ဒီဆောင်းပါးရေးဖြစ်အောင် ကိုးကားခဲ့သောလင့်နဲ့ ဒီဥပဒေ စတင်ပြဌာန်းဖို့အတွက် လွတ်တော်မှာ တင်သွင်းခဲ့သော ဇယားကွက်ကိုပါ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၇၃-၂ အရ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း တရားမဝင်နေထိုင်သူများနှင့် တရားမဝင် အလုပ်လုပ် နေခြင်းများကို လျော့ချရန်အတွက် Zairyu(သို့) I.C Cardပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေကို ပြဌာန်းရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန် ကြေငြာထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လိမ်လည်လှည့်ဖျား၍ ဗီဇာရယူခြင်းတို့မှ ပ,ပျောက်စေရန်နှင့် အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်မည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ရန်မှ ကာကွယ် နိုင်ရန်အတွက်လို့ ဆိုပါတယ်။
၎င်းဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြု၍ အလုပ်ခန့်ထားသော လုပ်ငန်းရှင်(ဝါ) အလုပ်ရှင်များလည်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက အပြစ်ပေးခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ ဥပဒေထုတ်ထားသလို မဟုတ်မမှန်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ဗီဇာရယူထား ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရုပ်သိမ်းပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး ခံရမယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ်။
ဒီဥပဒေကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ပြဌာန်းမှာလဲ...
၂ဝ၁၂ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မှစ၍ တောက်လျောက်ကျင့်သုံး တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
စုံစမ်းသိရှိရသလောက်တော့ အိုဗာစတေးပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ 'မ'သုံးလုံးစီမံကိန်းလို့ သိရှိပါတယ်။(အဆိုပါ 'မ'သုံးလုံး စီမံကိန်းဖြင့် တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသား ၁ သိန်း ၃ သောင်းကျော်ကို လျော့ ချနိုင်ခဲ့ခြင်းအကြောင်းကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မတ်လထုတ် မိုးသောက်ကြယ် ဂျာနယ် အတွဲ(၆) အမှတ်(၃)တွင် အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်)
I.C Card မှာ ဘာတွေရေးထားမလဲ...
နိုင်ငံခြားသားတဦးချင်း၏ အမည်၊ ကဒ်နံပါတ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ကျား/မ၊ လူမျိုး၊ လိပ်စာစသည်ဖြင့်ရေးထားပြီး Visaအမျိုးအစားကို လိုက်၍ ဖော်ပြထားမည်ဟုသိရသည်။
ကဒ်ထဲတွင် I.C Chipပါရှိမည်ဖြစ်ပြီး ¤င်းChipထဲတွင်ကာ ယကံရှင် ၏ကိုယ်အရေးအချက်အလက်အားလုံးကို ထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ် သည်။
I.C Cardထဲက Data တွေ ဘယ်ကရသလဲ...
နိုင်ငံခြားသားမှန်သမျှ မိမိ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လဝကရုံး သို့သွားရောက်၍ ကိုယ်တိုင်ရေးပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အလုပ်(သို့)ကုမ္ပဏီ၊ ကျောင်း၊ အလုပ်သမားဋ္ဌာန၊ အခွန်ဋ္ဌာန၊ ဟိုကင်း(ကျန်မာရေးအာမခံ)ဋ္ဌာန၊ ရဲဋ္ဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးရုံး၊ ပြည် နယ်၊ မြို့နယ်ရုံးစသည်တို့မှလည်း မိမိ၏အချက်အလက်များ ကို တရားရေး(လဝက)သို့ပို့ပေးရသည့်အတွက် လဝကမှလူတယောက် ချင်း စီ၏အချက်အလက်များကို ထည့်ပေါင်း၍ နေရာပေါင်းစုံမှရ ယူစီစစ်နိုင်သည်။
I.C Cardလုပ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ...
(၁) မိမိဓါတ်ပုံ(အလျား ၃ဝ စင်တီမီတာ၊ အနံ ၄ဝ စင်တီမီတာ)
(၂) ဦးထုပ်၊ ဦးဆောင်းစသည့်များ ဝတ်ထားသည့်ဓါတ်ပုံမဖြစ်စေရ
(၃) ဓါတ်ပုံသည် ကြည်လင်ပြတ်သားရမည်(အရိပ်များ၊ ရှိတ်များမပါစေရ)
(၅) မိမိကိုယ်ရေးအချက်အလက်(အမည်၊ အသက်၊ နေထိုင်သည့် နေရာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အိမ်ထောင်ရှိ-မရှိ အစရှိသဖြင့်)
(၆) လက်ရှိသုံးစွဲနေသည့် ဗီဇာသက်တမ်းအမျိုးအစား
I.C Cardထဲမှ ဘာတွေသိနိုင်သလဲ...
နိုင်ငံခြားသားတယောက်က အခွန်ဆောင်ထား/မထား၊ အလုပ် အကိုင်ရှိ/မရှိ၊ ဂျပန်စကားတတ်/မတတ်၊ လက်ရှိပညာသင်နေဆဲ ကျောင်း၊ ပညာသင်ခဲ့သောကျောင်း၊ ဟိုကင်း(ကျန်းမာရေးအာမခံ)၊ နင်း ကင်း(သက်ကြီးပင်စင်ထား/မထား၊ အသက်ရှင်နေသေး သလား/သေ သွားပြီလား၊ ကလေးရှိလျှင်ကျောင်းထား/မထား၊ ရာဇဝတ်မှုရှိ/မရှိ၊ ရဲကရှာနေ/မနေ၊ အကြမ်းဖက်ဖူးထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ဘာပြစ်မှုကျူးလွန် ထားဖူးသလဲ၊ ဘယ်အချိန်ကစပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်သလဲ၊ Visaအမျိုး အစားပြောင်းရင်ပြောင်းသလို၊ အလုပ်ပြောင်းရင် အလုပ်လုပ်တဲ့ဋ္ဌာန၊ ဆိုင် ပြောင်းရင်အလုပ်နေရာ၊ လစာကအစ ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်သည်။
အကြောင်းမကြားခဲ့ပါက ( နောင်တွင်သိရှိသွားမည်ဆိုပါက )ဒဏ်ငွေချ ခံရမည်။ အဖမ်းခံရမည်(သို့) Visaပြန်သိမ်းခံရမည်။ ကဒ်ပြားထုတ် ပေးခံရသူရဲ့ Data တွေအားလုံး တရားရေးဝန်ကြီး(လဝက) ကကိုင် ထားမည်ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်တိုင်ရေးပေးတဲီ့အေေ တွေနဲ့ မိမိရဲ့ကျောင်း၊ အလုပ်၊ မြို့ နယ်ရုံးစသည်တို့ကရေးပို့တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ကိုယ်တိုင်စစ် ဆေးပြီး၊ လူတဦးချင်းစီရဲီ့အေမှော အမှားများတွေ့ရင် မသင်္ကာဖွယ်ရာများ တွေ့ရှိ ပါက၊ လိမ်လည်ပြီးဗီဇာရယူထားသည်(Ä)ဟုယူဆရသော အချက် အလက်များတွေ့ရှိပါက၊ ဒါဏ်ငွေတပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ထောင်ချခြင်း၊ သို့မဟုတ် Viasပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီး နေရင်းတိုင်းပြည်သို့ ပြန်နှင်ပို့သည်အထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားမှန်သမျှ I.C Cardကို မယူလို့ မရပါဘူး။ ကားလိုင်စင်နဲ့ အတူတူဖြစ်ပြီး ကဒ်သက်တမ်းကုန်ရင်လည်း အသစ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းယူဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ပြီး ရဲနဲ့ လဝကစစ်ရင် ပြရပါမည်။ မပြချင်ရင်(သို့)မပြနိုင်ရင် ဒဏ်ငွေ-ထောင်ဒဏ်၊ ပြည်နှင်ဒါဏ်စသည်ဖြင့်ကျခံ ရမည်ဖြစ်သည်။
(၂)မိခင်/ဖခင်ဖြစ်သူက အလုပ် လာလုပ်သဖြင့် မှီခိုအနေဖြင့်လာ သောမိသားစုများ။
(၃) ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများကို သင်ယူရန် ရောက် ရှိနေသည့် ပညာသည်များ။
(၆) သံအမတ်နှင့် သံရုံးဝန်ထမ်း ၏အကူဝန်ထမ်းများ(ဥပမာ-က လေးထိန်း၊ထမင်းချက်၊ခြံစောင့်)
(၇) တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၊ ပါမောက္ခများ၊ ကျောင်းဆရာ များ၊
(၈) ပန်းချီဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ။
(၉) ဘုန်းကြီး၊ ဘာသာရေးဆိုင် ရာအကြီးအကဲများ
(၁ဝ)သတင်းသမား၊ မီဒီယာသမား၊ ဓါတ်ပုံဆရာများ၊
(၁၁)ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်၊ ရှေ့နေ၊ စာရင်းစစ်၊ ဆရာဝန်၊ နက်စ်၊ သွား ဆရာဝန်။
(၁၂)အစိုးရအချင်းချင်းလွတ်သော ပညာတော်သင်များ၊ အလွတ် ပညာတော်သင်များ။
(၁၃)အင်္ဂလိပ်စာဆရာ၊ အင်ဂျင်နီ ယာ၊ ကွန်ပျူတာပညာရှင်၊ ဘာ သာပြန်(ကုမ္ပဏီထဲတွင်)၊ ဒီဇိုင်း နာ။
(၁၄)အခြားတိုင်းပြည်မှလာရောက် ဖွင့်သောကုမ္ပဏီခွဲများတွင် အတူ ပါလာပြီး အမှုထမ်းသောကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ၊ စာဖိုမှူး၊ ပိုင်းလော့၊ လက်ဝတ်ရတနာပန်းထိမ်ပညာ ရှင်၊
(၁၅)ဂျပန်လူမျိုးနှင့်လက်ထပ် ထားသူ၊ မွေးလာသောကလေး၊ မွေးစားကလေး၊ အဲဂျူးရှ(Permanent Resident)နှင့်လက်ထပ် ထားသူ၊ မွေးလာသောကလေး၊ မိန်းမနှင့်ကလေး၊
(၁၆) ကွန်းဗင်းရှင်းဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသူ(ဂျပန်ရောက် မြန်မာများအခေါ် R ဗီဇာ)၊ S.S တဲဂျူးရှ (Long term Resident)၊ S.S Designated Activities(ဂျပန်ရောက် မြန်မာများအခေါ် တော့ခုတေး ဗီဇာ)၊ အင်ဒိုချိုင်းနာဒုက္ခသည်၊
(၁၇)နိကေးဂျင်း(တရုတ်ပြည်၊ ဘရာဇီလ်း၊ အမေရိကန်တို့တွင် သွားရောက်နေထိုင်သော ဂျပန် လူမျိုးမိသားစုများ)၊၊ တရားရေးရေးဝန် ကြီးဋ္ဌာနမှ ချမှတ်ထားပေးထားသော Permanent Resident သမားများ။
(၁၈) ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၈)ရက်နေ့တွင် အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်မည့်သူ
(၁) သင်္ဘော၊ လေယာဉ်စသည် တို့ခေတ္တရပ်နားချိန်ရက်(၃ဝ)မကျော်သည့် ဗီဇာသမား
(၂)သင်္ဘော၊ လေယာဉ်ပျက်၍ ၆ လမကျော်သော ဗီဇာသမား
(၄)အိုဗာစတေးဖြစ်ပြီးမှ ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူ နှင့်၊ ၃ လအထက် ဗီဇာမကျော်
(၅)အိုဗာစတေးမှုဖြင့် ဖမ်းမိပြီး မိခင်နိုင်ငံ ပြန်ရန်ပြင်ဆင်နေသူ၊ ပြည်နှင် အမိန့်ချမှတ်ခံထားရသူများ၊
(၆)ပြစ်မှု(သို့)ဥပဒေညိစွန်းမှုကြောင့် ကျောင်းသား၊ Work Visa၊ အလုပ်သင်၊ မှီခို၊ လက်ထပ်၊ ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားဆဲ၊ ရရှိပြီးသူများကို ဗီဇာဆက်မတိုးပေးတော့ဘဲ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံထားရသူ။
(၇) အလည်ဗီဇာ၊ ရက်တိုဗီဇာ(၃ လအောက်ပြည်ဝင်ခွင့်ရသူ)သမားများနှင့်
(၈) ဗီဇာသက်တမ်း (၃)လအထက်မရှိသော ကာလီးဖိုးမင့်၊ ကာလီထိုင်းဆိုင် သမားများ
(၃)အခြားနိုင်ငံတွင်ဒုက္ခသည်ခံထား သော ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် ဂျပန် လူမျိုးအဖြစ်မှရပ်ဆဲခံထားရသူ
(၅)UNဝန်ထမ်းများ၊ သံအမတ်နှင့်မိသာစုများ၊ သံရုံးဝန်ထမ်းနှင့်မိသားစုများ၊
(၆)၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၈)ရက်နေ့အထိအသက် ၁၆ နှစ် မပြည့်သေးသူ
(၁) I.C Cardကို သွားလေရာ ယူဆောင်မသွားလျင်
(၂) မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များအား လဝကသို့ သတင်းမပေးပဲ ထိန်ချန်ထားလျှင်(သို့)လိမ်လည်၍ပေးအပ် ကြောင်းaတွ့ရှိခဲ့လျင်
(၃) ရဲ(သို့)လဝကမှ စစ်ဆေးသည့်အခါ ပြသဖို့ငြင်းဆန်လျင်
(၄) I.C Cardအား ပြင်ဆင်ခြင်း (ဝါ)အတုလုပ်ခြင်း
(၅) အိမ်ပြောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ပြောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဗီဇာအမျိုးအစားပြောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များအား (၁၄)ရက်အတွင်း သတင်းပေးပို့ဖို့ ပျက်ကွက်လျင်ဖြစ်စေ။
(၁) လိမ်လည်လှည့်ဖြား၍ ဗီဇာရယူထားလျင်ဖြစ်စေ(Ä)
(၂) ဂျပန်နိုင်ငံသား(သို့)အမြဲအခြေချနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရရှိထားသူနှင့် လက် ထပ်၍ ဗီဇာရယူထားသော်ငြားလည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (၆ )လaကျာ်လွန်အောင် ကင်းကွာနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျင်(ဥပမာ- အတု လက်ထပ်ခြင်းမျိုး)(ÄÄ)
(၃) ခိုင်လုံသည့်အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာအား အသိ ပေး အကြောင်းကြားဖို့ပျက်ကွက်လျင်(ဝါ) လိမ်လည်ထားလျင်(ÄÄÄ)
(၄) အိမ်ပြောင်း၊ အလုပ်ပြောင်း၊ ဗီဇာပြောင်းကို ရက်(၉ဝ)အတွင်း အသိ ပေး အကြောင်းကြားဖို့ပျက်ကွက်လျင်
(Ä)ဒုက္ခသည်ဗီဇာ၊ လက်ထပ်ဗီဇာ၊ အထူးနေထိုင်ခွင့်(S.S)ဗီဇာ၊ Work Mermit ဗီဇာအစရှိသည်တို့ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြား၍ ရယူထား ကြောင်းကို တိုင်ကြားခံရလျင်သော်လည်းကောင်း(သို့တည်းမ ဟုတ်) စုံစမ်းတွေ့ရှိလျင်သော်လည်းကောင်း လဝကအရာရှိများမှ ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်မှန်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရုပ်သိမ်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်
(ÄÄ)ကလေးစောင့်ရှောက်ခွင့်အတွက် အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်နေဆဲအခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ၊
-အိမ်ထောင်ဖက်က ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသောကြောင့် အမှုရင်ဆိုင်နေရသော ကာလတွင်ဖြစ်စေ၊
-မိမိအနေဖြင့် ပြစ်မှုကျုးလွန်ခြင်းမရှိသည့်တိုင် ခွဲခွာနေရသည့် အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံလျင် လျှော်ကန်လျှောက်ပတ်သည်ဟု ယူဆပြီး လက်ရှိဗီဇာကို သက်တမ်းတိုးပေးနေဦးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် (၆)လ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ခွဲခွာနေရသည့်တိုင် မိမိရင်သွေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ဆက်လက်နေထိုင်နေသည့် နိုင်ငံသားခြားသားများအတွက် မိမိ၏နေထိုင်ခွင့်ပုံစံကို ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
(ÄÄÄ)အောက်ပါအချက်တွေကြောင့် သင်ဟာ လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာအား အသိ ပေးအကြောင်းကြားဖို့ပျက်ကွက်လျင်(ဝါ) လိမ်လည်ဖုံးကွယ် ထားလျင် တရားရေးမှ လက်ခံစဉ်းစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
(က) မိမိအလုပ်လုပ်နေသော ကုမ္ပဏီ ရုတ်တရက်ဒေဝါလီခံ လိုက်ပြီး မိမိလည်း နေစရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုး၊
(ခ) နာတာရှည်ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်နေသည့်အခါမျိုး
(ဂ) အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံနေသူဖြစ်သောကြောင့် အသစ်ပြောင်းသည့် နေရပ်လိပ်စာကို မိမိကိုနှပ်စက်သူ သိရှိသွားမှာကို စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေသည့်အခါမျိုး
(၁) နေထိုင်ခွင့်ကဒ်ပြား ပြင်ဆင်ခြင်း(သို့)အတုလုပ်ထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်း၊
(၂)အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် ကြီးလေးသော ပြစ်ဒါဏ်တခုခုကို ကျုးလွန်မိသဖြင့် အကျဉ်းကျခံရ လျင်သော်လည်းကောင်း၊
(၃) မသာမာသောနည်းဖြင့် နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း(သို့) ဗီဇာရယူထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျင်သော်လည်းကောင်း
မိုးသောက်ကြယ်စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအနေနဲ့ ဖော်ပြခဲ့သော အချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardဆိုတာ ကြောက်စရာပါလား..။ ကောင်းကွက်လည်း တစ်ခုမှ မရှိပါလား လို့ တွေးထင်စရာရှိပါတယ်။အဆိုးထဲကအကောင်းလို့ပဲ ပြောရမလား ကောင်းကွက်ကိုလည်း ဖော်ပြသင့်တယ်လို့ ဆိုရ မလား ဒီကဒ်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့-
(၁) ဗီဇာသက်တမ်းကို ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးခြင်း(Ä)၊
(၂) နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်ခွာသည့်အခါ ၁ နှစ်အတွင်း Re-entry Visaယူစရာမလိုခြင်း၊
(၃) ပြည်ပမထွက်ခွာခင် ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် လျှောက်လွှာတင်ပြီး ထွက်ခွာပါက ပြန်လည်ဝင်ခွင့်ကို ၃ နှစ်အစား ၅ နှစ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ခြင်း၊
(၄) အေးဂျူး(သို့)တေးဂျူး(သို့) အထူးနေထိုင်ခွင့်သမားများအတွက် အလုပ်အကိုင်များ ပေါများလာနိုင်ဖွယ်ရှိခြင်း(ÄÄ)
(Ä)ဗီဇာသက်တမ်း ၅ နှစ်အထိ တိုးမြှင့်ခံရမယ့်စာရင်းထဲမှာ အထူးနေထိုင် ခွင့်သမားတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးသတိပြုရမှာက ဗီဇာသက်တမ်းတိုးတဲ့အခါမှာ Point Systemဆိုတဲ့ အမှတ်ပေး စနစ်နဲ့ စတင်ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသင်ဟာ ပြစ်မှု(ရဲမှု)မရှိဘူး၊ ဂျပန်နိုင်ငံကိုလည်း အနှောက်အယှက် ပေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူး၊ ချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ 'စည်းကမ်းလိုက်နာ ဘေးကင်းစွာ'နေထိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိမှ ဗီဇာ သက်တမ်းကို ၅ နှစ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ တေးဂျူး(Long term Resident)မကလို့ အေးဂျူး(Permanent Resident)ပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီဇာလျော့ခြင်း(သို့)ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်
(ÄÄ)၇-၉ ဥပဒေကြောင့် Work Permit သမားများ၊ လက်ထပ်ဗီဇာ အတုလုပ်ထားသူများ(အထူးသဖြင့် တရုတ်လူမျိုးများ)ပြည်တော် ပြန်ဖို့များနေတယ်လို့ သိရှိရတဲ့အတွက် အေးဂျူး(သို့)တေးဂျူး(သို့) အထူးနေထိုင်ခွင့်သမားများ အလုပ်အကိုင်ပေါများနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ သုံးသပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်(စကားချပ်)
I.C Cardကို ဘယ်နေ့၊ ဘယ်လ၊ ဘယ်အချိန်မှ စတင်လုပ် ဆောင်လို့ရပြီလဲ
တရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ထားချက်အရ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် (သောကြာနေ့)ကစပြီး သက်ဆိုင်ရာ လဝကရုံးမှာ လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကတော့ 'ရှင်နာဂါဝါ'ရှိ လဝကရုံးဆိုလျင် အောက်ထပ်မှာ လျှောက်လွှာပုံစံယူပြီး ၂ ထပ်ရဲ့ C ကောင်တာမှာ သွားလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိပါက လဝကရုံးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော မြန်မာလူမျိုးတစ်ဦး ရှိပါတယ်။ သင့်အနေ နဲ့ စုံစမ်းရေးဌာန (Information Center)သို့သွားရောက်ပြီး (မြန်မာလူမျိုးနှင့် တွေ့ချင်ကြောင်း)အကူအညီတောင်းပါက ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။(နာမည်မဖော်ပြပေးနိုင်တာကို နားလည်ပေးစေချင်ပါသည်)
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနေ့ ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်(သောကြာ နေ့)နောက်ဆုံးထားပြီး သွားရောက်လုပ်ဆောင်ကြပါရန်
လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကဒ်မှာ သက်တမ်းကျန် သေးတယ်ဆိုရင်ရော...
(၁)မိမိရဲ့ နိုင်ငံခြားသားကဒ်မှာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် သို့တည်းမဟုတ် ထိုထက် နှစ်ပိုများတဲ့ သက်တမ်းရှိသေးတယ်ဆိုရင် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardကို လဝကရုံးသွားပြီး လုပ်ဖို့မလိုအပ်သေးပါဘူး။ လက်ရှိ နိုင်ငံခြား သားကဒ် သက်တမ်းအလိုက်မှာ ပါရှိတဲ့အတိုင်း မိမိရဲ့နေထိုင်ခွင့် ကဒ်ကို တူညီတဲ့အဆင့်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
ရဲ(သို့)လဝက စစ်လျင် လက်ရှိသက်တမ်းရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကဒ်ကို ပြသရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
(စိတ်ပူတတ်သူများအနေနဲ့ ယခုကတည်းက သွားလုပ်မယ်ဆိုရင် လည်း လက်ခံပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardကို ထုတ်ပေးသေးမှာမဟုတ်ပဲ သင်ဟာ တာဝန်သိလုပ်သားပြည်သူတစ်ဦး အနေနဲ့ လာရောက်သတင်းပို့ထားကြောင်း မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။)
(၂) မိမိရဲ့ နိုင်ငံခြားသားကဒ်မှာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက် သို့တည်းမဟုတ် ထိုထက်ပိုနောက်ကျပြီး ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကုန်ဆုံးနေသူ တွေကတော့ မဖြစ်မနေ Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardကို သွားလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardကို ကော်ပီ(မိတ္တူ)ကူးလို့ရပါသလား...။ ကော်ပီလိုချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...
ကော်ပီကူးလို့မရအောင် အဆင့်မြင့်နည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိမိဟာ အလုပ်(သို့)အခြားကိစ္စတွေအတွက် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardရဲ့ မိတ္တူကို လိုချင်တယ်။ သို့တည်းမဟုတ် အဆိုပါ ကဒ်သုံးစွဲနေကြောင်း ထောက်ခံစာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် မိမိနဲ့ သက်ဆိုင် တဲ့မြို့နယ်ရုံးမှာ သွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ကုန်ကျစားရိတ်ကိုတော့ မိမိကပေးဆောင်ရမယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
မိုးသောက်ကြယ်စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအပါအ၀င် မောင်ရှင့် ဖဘ ရှိ ဂျပန်ရောက် မြန်မာများကို ကျနော့်အနေနဲ့ အထူးသတိပေးချင်တာကတော့-
(၁) Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardလုပ်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံးရက်ဟာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၈ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)ဖြစ်ပြီး စတင်အသက်ဝင်ကျင့်သုံးမှာကတော့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၉ ရက်(တနင်္လာနေ့)ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ ကျနော်တို့မြန်မာအများစုဟာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့ကျမှ Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Cardလုပ်ရမယ်လို့ ထင်နေကြသူများပါတယ်။ ဒါ လုံးဝမှားနေပါတယ်။
သတိထားပြီး မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ကြပါ။ မမေ့ကြပါနဲ့။
-(က)ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့မြို့နယ်ရုံးသို့ မိမိဟာ ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်ရပ်ကွက် ဘယ်နေရာကိုပြောင်းပါပြီဟု အသိပေးအကြောင်းကြားရပါမယ်။ ထို့နောက် ပြောင်းရွေ့လိုက်တဲ့ နေရပ်သစ်ရှိ နယ်မြေခံမြူနီစီပယ်ရုံး (မြို့နယ် ရုံး)သို့ သွားရောက်အကြောင်းကြားခြင်းနှင့်
-(ခ)တရားရေးဌာန(လဝကရုံး)သို့ ၁၄ ရက်အတွင်း နေရာသစ် ပြောင်းရွေ့ကြောင်း အသိပေး သတင်းပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်(၂)ချက်ကို မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ကြပါ။ မမေ့ကြပါနဲ့။
(၃)အလုပ်ပြောင်း၊ ဗီဇာပြောင်းရင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ပါပဲ။ တရားရေးဌာန(လဝကရုံး)သို့ ၁၄ ရက်အတွင်း အသိပေး သတင်းပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ကြပါ။ မမေ့ကြပါနဲ့။
(၄) မိမိအချက်အလက်တွေကို တရားရေးဌာန(လဝကရုံး)သို့ ပေး ပို့တဲ့အခါမှာ အမှန်အတိုင်းပေးပို့ကြပါ။ အမှားအယွင်း တစ်စုံတရာ တွေ့ရှိတာနဲ့ (က)ငွေဒါဏ်၊ (ခ)ထောင်ဒါဏ်၊ (ဂ)နောက်ဆုံးအဆင့် ပြည်နှင်ဒါဏ် အထိပါ ချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။
မိမိတိုင်းပြည်မကောင်းလို့၊ မတည်ငြိမ်လို့ဆိုပြီး ဒုက္ခသည်ဗီဇာရရှိ ထားသူ (သို့တည်းမဟုတ်) အမြဲတမ်းအခြေချနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ ရရှိထားသူဖြစ်ပါစေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တယ် ဆိုရင် ပြည်နှင်ဒါဏ်အထိ ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်-
(၅) နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သတိပေးချင်တာကတော့ ဗီဇာသက်တမ်း တိုးတဲ့အခါမှာ
Point Systemနဲ့ ဆောင်ရွက်နေ ပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် အမှတ်လျော့စေမယ့် အပြုအမူများ ရှောင်ကြပါလို့ သတိ ပေးနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်သူများအားလုံး ဘေးဘရာဝေးကွာပြီး၊ ရန်သူမျိုး(၅)ပါး အပြင် တစ်ပါးသူစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ လွှင့်နေသော ကောလဟာလဘေးမှလည်း ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ အစဉ်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လျက်-
ဤဆောင်းပါးရေးဖြစ်အောင် အဘက်ဘက်မှ အချက်အလက်များစုဆောင်းပေးခဲ့ကြသော မိုးသောက်ကြယ်စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့သားများနှင့်တကွ မသိနားမလည်သည့် ဂျပန်စာလုံးများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဘာသာပြန်ပေးခဲ့သော ကိုမျိုးမြင့်ဆွေ၊ ကိုချစ်မိုး(Mr Kurosaki Eiji)၊ နှင့် မိမိမေးမြန်းသမျှကို ဖြေကြားပေးခဲ့သည့် လ၀ကအရာရှိတစ်ချို့ကိုလည်း စာဖတ်သူများကိုယ်စား ကျေးဇူးဥပကာတင်ရှိပါကြော
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:30 AM No comments:
▼ 07/22 - 07/29 (21)
Children Development Center-CDC ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး...
၁၉ဇူလိုင်ကို မမေ့နိုင်ကြသလို သြဂုတ် ၁၂ကိုလည်း မမေ့...
သြစတြေးလျား ကရင်အစည်းအရုံး(AKO) အစည်းအဝေးကြီး ပြီး...
NLD အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဝင်များမှ...
ဂျပန်နိုင်ငံ TOKYO မြို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရ...
ဟာဂျီကျော်ခင် (ခေါ်)၀န်ကြီးကျော်ခင် မှ သီတာထွေးအမေက...
ဂျပန်တွင် စတင်ကျင့်သုံးတော့မည့် Zairyu Card နှင့် ...
အချိုမှုန့် ဆိုတာ ဘာလဲ ........
ထပ်မံတိုက်ခိုက်ရန် လာကြသော သောင်းကျန်းသူ ၆၀၀ ကျော်...
ဘင်္ဂလီမူဆလင်များက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအား ဖန်းတီးေ...
UNFC တပြေးညီမူ မချမှတ်နိုင်ခဲ့